Inona ireo fomba ahafahana manamboatra trafikana mamadika rindran-kaonty e-commerce?
Raha toa ka ampidirina amin'ny tranokalanao avokoa ny fikarohana teknika fanavaozana rehetra, dia hanampy ny orinasa ambony kokoa amin'ny pejy valin'ny fikarohana ary hametraka ny fitohizan'ny fifamoivoizana mitodika. Izy io dia mahatonga ny fanavaozana maodim-pitadiavana tena sarobidy ho an'ny tranokala ecommerce. Raha vita tanteraka amin'ny fampitam-baovao amin'ny tambajotra sosialy, mailaka marketing, ary fanentanana hafa fampiroboroboana, dia mahasarotra ny fandraharahana rehetra any anaty aterineto.
SEO amin'ny endriny fototra dia azo zaraina amin'ny alàlan'ny fanatsarana sy ny pejy. Ny fanavaozana hita ao amin'ny pejy dia manondro ireo teknolojia manerana ny tranonkala izay manatsara ny fahaizan'ny mpampiasa amin'ny loharanon'ny Internet - affordable windows vps. Ankoatra izany, izy io dia manampy ny fitaovam-pitadiavana mba hahatakatra ny toerana misy ny tranonkalanao dia ny hamela azy ireo hampiseho izany amin'ny fangatahan'ireo mpampiasa mety. Ny fanamafisam-peo ivelan'ny pejy dia manamboatra fitaovam-pitadiavana ny safidinao manokana amin'ny tranonkalanao ho an'ny mpampiasa indrindra. Ny ampahany fototra amin'izany dia avy amin'ny backlinks. Mila manana rohy mahazatra avy amin'ny loharanom-baovao hafa ianao mba hahatonga ny tranokalanao hita amin'ny mpihaino anao.
Miverina amin'ny dofollow sy nofollow ny backlinks amin'ny endriny. Dofollow backlinks dia ireo izay mitondra ny tranokalanao SEO. Ny rohy toy izany dia toy ny vato avy amin'ny loharano hafa.
Ankoatra izany, raketary nofollow dia rohy raha misy olona manome adiresy izay tsy mametraka sanda amin'ny tranonkala mifandraika. Mba hamoronana rohy nofollow, mpanoratra fotsiny dia mila manampy ampahany kely fotsiny amin'ny HTML amin'ny rohy. Raha fijerena ny code HTML dia azonao atao ihany koa ny milaza raha manaraka na mamorona ny rohy. Ohatra, ny habetsaky ny rohy amin'ny YouTube, Facebook, bilaogy, ary forums dia saika nofolo foana. Mbola tsara foana ny fahefana anananao, saingy tsy afaka manome anao ny fitomboan'ny lozam-pikarohana.
Ahoana no hamantarana ny hasin'ny rohy tafiditra?
Misy antony maromaro manan-danja izay mila dinihina amin'ny famaritana ny lanjany sy ny fiantraikan'ny backlinks.
Ndeha hifanakalozantsika hevitra marim-pototra miverimberina:
Ny rohy ivelany avy amin'ny tranonkala avo lenta dia tena ilaina kokoa ho an'ny fanatsarana tranonkala noho ireo izay avy amin'ny toerana tsy misy ilana sy ambany;
Ny rohy avy amin'ny sehatra tsy manam-paharoa dia manome lanja kokoa ny tranokalanao noho ny rohy avy amin'ireo tranonkala izay mifandray aminao taloha;
Ny rohy votoaty dia ekena kokoa noho ny tsy mifanaraka amin'ny lohahevitra;
Ny rohy misy lahatsoratra manan-danja sy manintona kokoa dia mamaritra ny teny manan-danja mifantoka amin'ny tenimiafina, indrindra raha toa izy ireo dia mitovy amin'ny anaranao.
Ahoana ny fomba hamoronana backlinks amin'ny famokarana varotra?
Mamorona votoaty izay hizaran'ireo mpampiasa
Ny fomba tsotra indrindra hahazoana rindran-damina organika mankany amin'ny tranonkalan'ny e-varotra dia ny hamoronana votoaty lehibe sy mandresy lahatra amin'ny horonan-tsary, video na endrika fanoratana izay hizaran'ireo mpampiasa amin'ny alalan'ny faniriany.
Mamorona ny mombamomba anao
Teknika iray hafa tsotra nefa ilaina ilaina ny manolo-kevitra ireo mpitoraka blaogy mba hamorona hevitra tsara momba ny vokatrao. Hisy garazy ho an'ny tranokalanao.